भाइरल भइरहेको 'पुल्चोकमा कुटिएका प्रहरी'को अल्कामा उपचार, कस्तो छ उनको अवस्था?
3rd September 2020, 03:41 pm | १८ भदौ २०७७
काठमाडौं : बिहीवार बिहानैदेखि रातो मछिन्द्रनाथको रथ तान्न विषयमा पुल्चोकमा स्थानीय प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए। बिहान ११ बजेसम्म अवस्था सामान्य नै थियो। तर, दिउँसो १ बजेपछि भने स्थिति निकै गरम बन्यो।
तर, यही भिडन्तको बीचको घानमा भने एक ट्राफिकका प्रहरी जवान पर्न पुगे। अहिले समाजिक संञ्जालमा त्यही भिडियो भाइरल भइरहेको छ जसमा देखिन्छ - उनको मोटरसाइकल खोसिएको छ भने उनले कुटाइ खाएका छन्। आखिर ती को हुन् जसले कुटाइ खाए?
भाइरल भएको पुल्चोकमा कुटिएका प्रहरीको अलकामा उपचार, कस्तो छ उनको अवस्था?
Posted by PahiloPost on Thursday, September 3, 2020
प्रहरी जवान कमल प्रसाद घिमिरेमाथि प्रदर्शनकारीले निर्मतापूर्वक आक्रमण गरेका हुन्। उनलाई मोटसाइलबाट थुतेर लछारपछार गर्दै मुक्का प्रहार भएको छ। जबकि उनको भूमिका भिडलाई नियन्त्रण गर्ने भन्ने केही थिएन। उनी बिहानैदेखि ड्युटीमा खटिएका दिए - सवारी व्यवस्थपनका लागि।
'हाम्रो ड्युटी सवारी व्यवस्था मात्र हेर्ने हो। त्यही क्रममा उहाँ सवारीको डाइभर्सन गर्न जानु भएको थियो,' ट्राफिक प्रहरी निरीक्षक भोला अधिकारीले भने। रामेछापको चोप्राङमा दरबन्दी भइ हाल पाटनमा खटिँदै आएका थिए।
Kamala Thapa Magar[ 2020-09-03 10:57:30 ]
बल्ल जनताको पालो आय छ भग्बान जनतालाई यस्तै शक्ति दिनु
Yubraj Gurung[ 2020-09-03 02:51:30 ]
Upadesh Shrestha[ 2020-09-03 02:03:04 ]
yesto garnu murkhata ho.
SiMon LaMa[ 2020-09-03 11:35:21 ]
भनिन्छ, धर्म, सस्कृति र परम्पराले समाज लाई अनुशासित तबरले अगाडि बढाउछ । तर यही समाजमा मानबीयता भन्ने छैन भने त्यसले खासै तात्विक अर्थ र महत्व राख्दैन । हुन त सबै लाई खराब भन्न नसकिएला तर जुन भिडियोमा देखिएको द्रिश्य हेर्दा अत्यन्त निन्दानिय घटना देखिन्छ । शायद परिस्थितीलाई गम्भिर मध्येनजर नगरीकन रथ तान्ने कार्य गरेको देखिन्छ, जुन अगुवा कर्ताहरुको गल्ती हो । यनिवे, घाइते ट्राफिक प्रहरीको शिघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना तथा उत्छ्रिङ्खल् आक्रमणकारीहरु लाई कडा सजाय होस् !
Amir Shakya[ 2020-09-05 11:17:01 ]
जात्राकाे भिडमा बाइक नपठाइ राेक्ने त्राफिक अाफै किन गएकाे? संका लाग्छ।
Gokul Bhandari[ 2020-09-03 08:20:43 ]
kohi pani pitinu ramro haina janataa hos wa security force ! sarokaarwalaharule time mai sahi decision lieko bhaye tyo dukhad ghatana ghatne thiiyena ! deshko dharma ra sanskriti masne karya kunaipani halatmaa mannya hune chhina .yo jaattra phagat newarharuko matrai nanbhae sampurna nepaliharuko ho !
Hutaraj Shrestha[ 2020-09-04 09:36:36 ]
यो जवानलाई ईन्सपेक्टरमा
प्रमोशन दिनु किन अल्छी लागेकोअाईजी साप?
Duke-mandu Sherpa[ 2020-09-03 05:38:37 ]
ढिलो चाडो मात्र हो पालो सबैको आउछ
Sarju Amatya[ 2020-09-04 02:08:39 ]
Aru jantako chahi kaha upachar bhayo ta ?
Shrestha Roshan[ 2020-09-04 12:46:31 ]
Police Kuteko matra update garne teha buda ba lai pani kuteko xa keta keti haru lai pani ko force le lagera ghaite vako xa Khoi tyo report 😭😭😭😭😭😭😭
Nitu Subbaa Giri[ 2020-09-03 05:00:16 ]
Tara Lama[ 2020-09-03 11:06:47 ]